Turkish Airlines oo Muqdisho keentay gargaar ka yimid kooxda The Love Army for Somalia (Daawo Sawirro) – idalenews.com
Turkish Airlines oo Muqdisho keentay gargaar ka yimid kooxda The Love Army for Somalia (Daawo Sawirro)
Baydhabo(INO); Dayuurad kuwa xamuulka qaada oo ay leedahay shirkada Turkish Airlines ayaa maanta garoonka Aadan cadde ee magaalada Muqdisho ka soo dejisay gargaarkii ugu horeeyey ee ka yimid kooxda Samafalayaasha ee la magac baxay The Love Army for Somalia kaasoo loogu talo galay dadka ku macluulsan Somalia.
Maamulka Turkish Airlines ayaa sheegay in iyagoo ka damqanaya Macluusha ka jirta Somalia iyo baahida dhinaca Gaadiidka ee soo-daabulista kaalmooyinka ka imanaya dalalka caalamka inay si free ah dayuuradahooda u adeegsan doonaan soo daabulida Kontaynaradda Gargaarka Samafalka ee ay soo dhiibaan kooxda Samafalayaasha ee la magac baxay The Love Army for Somalia.
Masuuliyiin ka tirsan shirkadda Turkish Airlines oo shir jaraaid ku qabtay garoonka Aadan cadde waxay xuseen inay Dayuuradahooda ganacsiga ku soo qaadi doonaan Gargaar kasta ee loo soo dirayo dadka ku macluulsan Somalia, si lacag la’aan ah, waxayna xuseen inay duullimaadkan uu yahay kii ugu horeeyey ee xamuul ayna dayuuradu kentay 60 tan oo cunto ah.
Maamulka Turkish Airlines waxay kaloo sheegeen inay Kooxda Samafalayaasha ee The Love Army for Somalia u oggolaan doonaan inay Kontaynarada Cuntadda lagu soo daabulo Diyaaradaha Ganacsiga ee ku wajahan Somalia, ilaa laga baxayo Xaalladda Macluusha ee ka jirta Somalia.
Shixnada samafalka ee saaka dayuurada Turkish Airlines ay isugu jirto Bariis, Bur, Saliidda Cuntada iyo qalab kale oo asaasi ah.
Kooxda Love Army for Somalia waxay sheegeen haddii la midoobo in wax kasta la qaban karo, kana go’an tahay inay hubiyaan in Somalia la gaarsiiyo kaalmo kasta oo ay u baahan yihiin.
Qoraal ay Shirkadda Turkish Airlines soo dhigeen Twitterkooda @TurkishAirlines waxay ku sheegeen inay aad u jecel yihiin dadka Soomaalida iyo inay micno weyn u samayso Duullimaadyadda ay Somalia kaga hawlgalan.
Galmudug oo Digniin culus u diray Dowlada Federaalka Soomaaliya
Weerar Khasaaro geestay oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho